XOG RASMI AH: Xaggee ku dambeeyey khilaaf meel xun gaaray oo u dhaxeeyey Taliyaha Ciidamada Puntland iyo M/weynaha Puntland? – Puntlandtimes
XOG RASMI AH: Xaggee ku dambeeyey khilaaf meel xun gaaray oo u dhaxeeyey Taliyaha Ciidamada Puntland iyo M/weynaha Puntland?
September 30, 2018 W LAASCAANO
GAROOWE(P-TIMES) – Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu xaqiiqsaday in uu jiray khilaaf xoog leh oo u dhaxeeyey Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Taliyaha ciidamada Daraawiishta Puntland Jen, Siciid Maxamed XIrsi, kuna wajahnaa arrimaha dagaalada ee gobalka Sool oo ay dhinacyadu aad iskugu hayeen.
Warsiduhu wuxuu ogaaday in taliyaha ciidamada Puntland Jen, SIciid dheere u gudbiyey Madaxweyne Gaas ka hor safarkiisii gobalada Sanaag, Karkaar iyo Barri in uu iskaga dagayo xilka taliyaha ciidamada, ka dib markii uu sababa uga dhigay marxaladaha iyo cabashada ciidamada oo aan tixgalin gabi ahaanba la siinin.
Sidaas oo kale warsidaha ayaa ogaaday in arrimaha ku saabsan dagaalka Tukaraq ee gobalka Sool, oo Xukuumaddu ay mawqif ka qaadatay uusan raali ka noqonin taliyuhu in uu raaco mawqifkaas, maadaama uu yahay qofka ay ku soo laabanayaan eedaha ka dhalanaya talaabo kasta oo la qaado.
Taliyaha ayaa go`aansaday in uu xilka iskaga dago, isagoo qadimay warqadda shaqo ka tagida, balse Madaxweynaha Puntland ayaa ka diiday is casilaaddan sidda ay ogaatay Puntlandtimes.com, waxaana uu sheegay in la xalin doono caqabadaha jira.
Isimadda gobalka Nugaal qaar kamid ah ayaa dhexdhexaadin ka galay arrimaha u dhaxeeya Madaxtooyada & Taliska ugu sareeya ciidamada Difaaca ee Puntland, waxaana kulamo ay la yeesheen labada dhinac oo ay kala hadleen waqti xaadirkan iyo arrimaha ciidamada ama tabashada ku wajahan.
Warsiduhu wuxuu ogaaday in uu Jeneraal Siciid Maxamed Xirsi (Siciid Dheere) ka laabtay is casilaad uu soo gudbiyey, laguna qanciyey in arrimaha uu ka cabanayo wax laga qabanayo, waxyaabaha lasoo qaadayna waxaa kamid ahaa xoreynta gobalka Sool iyo dagaal waqtigan lagu qaado in ay amarkiisa leedahay Xukuumadda talada haysa.
Madaxweynaha Puntland ayaa la xaqiijiyey in uu hoosta ka xariiqay suuragalnimada in uu qaado dagaal, iyadoo mudo xileedkiisa ay ka harsan tahay wax ka yar 110 maalmood, lana qorsheynayo in uu dagaal qaado.
Xog laga helay Madaxtooyada Puntland ayaa daaha ka rogeysa in Puntland ay qorsheynayso dagaal culus oo ay dib ugu soo celiso magaalada Laascaanood kahor waqtiga doorashada, taas oo haddii ay dhacdo noqonaysa waxa ugu weyn ee ay Xukuumaddan ku gali karto Loolan doorasho.
Is arag ayay yeelan doonaan Taliyaha ciidamada Daraawiishta Puntland iyo Madaxweyne Cabdiweli Gaas, oo ay uga hadlayaan arrimaha ku wareegsan ciidamada iyo sidii xal rasmi ah looga gaari lahaa tabashooyinkan.
Tan iyo wixii ka dambeeyey markii bishii May oo ay dagaalo dhexmareen Puntland & Somaliland, dhanka wada shaqeynta Madaxtooyada iyo taliska ciidamada ayaa warar kala duwan kasoo baxayeen, waxaana xogaha qaarkood sheegayaan in aan la mahdin talaaboyinka qaarkood oo ay isku hayeen labada dhinac.
Arimaha ciidanka ma aha in lagu soo qoro meel public ah, waase been in Gaas dagaal gelayo.
gaas waa dumar ma dumarba dagalama
Caqli wanaagsan ma ahan in dagaal hada la galo. Waa wakhti kala guur ah. Gaas haduu xafiiska baneeyo dagalba ha sugin. Mucaarad ku sheega muqdisho la hago tilaabada ugu horeysa ee ay qaadayaan waa kasoo bixida furinta tukaraq. Ma diidi karaan amarka xamar uga imaandoona. Waa hadii ay ku guuleystaan madaxnimada puntland. Markaas baa la ogaan cida naasa leh.
Kkkkk Gas ha noolaado.
Nin ka geesisan gayigaba kama dhalan.
ilaa iyo maalintii la doortay ilaa iyo hada oo maalmo ka hareen xukumadiisa, dagaal iyo duulaan aan joogsi lahayn ayuu cadowga kula jirey. Puntlandna lagama guuleysan.
Inta naasaha leh oo caloosha jilicsan Gas way kasoo horjeedaan. Anigu se halyeeyada ayaan hiil siiyaa
mohmud Ali says:
illahow adaa jira ,,ma dagaal baa lagu jiri karaa war dad yahow puntland jiri taankeeda illah ka dib dad baa dhiigooda iyo maalkooda ku baxshay mana ku harsan waligood,,marka dadkii ka dhaxlay waxaa laga rabey shacab iyo madax ba in ey illah ku mahadiyaan oo yiraah daan dadkaas illah janada ha ka waraasho,,nabad iyo nolal iyagaa dhiigoda ku baxshay,,jaahiliin kala qeybi naya shacabka puntland illahow dadka ka qabo karan maayaan dhibka loo soomaray nabad iyo nolal,,,war intaad dhulkaada dhisan laheed baad rabtaa in aad dagaal aad dadka ku baabi isid,,cabdulaahi yuusuf wuxuu dhintay isgoo maal heysan laakiin wuxuu katagay calankii somali oo kataagay villa somaliya, iskadaaba puntland oo nabada,,via puntland iyo somalia oo dhen,,